မမေတေို့ရဲ့ ဘဘေီလေးကို ကောငျးကောငျး နားလညျစနေိုငျမယျ့ လက်ခဏာမြား - Lifestyle Myanmar
ဘဘေီလေး အရမျးငယျသေးတဲ့အခြိနျမှာ မိဘတှဟော သူတို့ကလေးလေးရဲ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ပတျသတျပွီး စိုးရိမျမှုတှေ ရှိကွပါတယျ။ မိဘတှဟော ဘဘေီလေး ဘာဖွဈခငျြတာလဲ၊ ဘာ့ကွောငျ့မအီမသာ ဖွဈနတောလဲဆိုတာ အတိအကြ ခနျ့မှနျးဖို့ ကွိုးစားကွပါတယျ။ မိဘတိုငျးက ကလေးရဲ့ လက်ခဏာတဈခုခွငျးစီကို အဓိပ်ပာယျသိနိုငျအောငျ၊ နားလညျနိုငျအောငျ လလေ့ာကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘဘေီလေးက စကားမပွောတတျသေးတာကွောငျ့ မိဘအသဈတှအေနနေဲ့ နားလညျဖို့ သိပျမလှယျပါဘူး။ ကြှမျးကငျြသူမြားက ဘဘေီလေးဟာ လူကွီးတှကေို ဘယျလိုနညျးလမျးတှနေဲ့ ဆကျသှယျနိုငျသလဲဆိုတဲ့ ဖျောပွပေးထားပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ခှဲခွားဖို့ အသုံးပွုတဲ့ အခြို့သော နညျးလမျးလေးတှကေ စိတျဝငျစားစရာ ပါပဲ။
၁။ သူတို့ငိုတဲ့ နညျးလမျး
ငိုတာက သူတို့ဘဝရဲ့ ပထမ လေးလအတှငျးမှာ သူတို့လိုအပျခကျြတှကေို ဖျောပွတဲ့ အဓိက နညျးလမျးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကလေးက ဗိုကျဆာလို့ငိုတာလား? နာကငျြလို့ ငိုတာလား၊ တခုခုကွောငျ့ ငိုတာလားဆိုတာကို မိဘတှေ ဘယျလိုနားလညျနိုငျမလဲ?
မိဘတှေ လာချေါဖို့ ငိုခွငျး။ ။ ကလေးဟာ တဈယောကျတညျး အခြိနျအကွာကွီး နခေဲ့ရတဲ့အခါ ၊ မိဘတှရေဲ့ အခြီအပိုးကို ခံခငျြတဲ့အခါ ငိုတတျကွပါတယျ။သူတို့ဟာ ၅စက်ကနျ့ ၆စက်ကနျ့လောကျ ဆကျတိုကျငိုပါတယျ။ ဘယျသူလာခြီမလဲလို့ စောငျ့ဆိုငျးခွငျးဖွငျ့ ငိုတာကို စက်ကနျ့ ၂၀လောကျ ခဏရပျထားပါတယျ။ မိဘက လာမခြီဘူးဆိုရငျ ဘဘေီလေးတှဟော အကွိမျမြားစှာ ထပျခါထပျခါ ဆကျငိုလာပါလိမျ့မယျ။
ဗိုကျဆာလို့ ငိုခွငျး။ ။ ကလေးဟာ ကောကျခြီမခံရဘူး၊ နို့တိုကျမခံရဘူးဆိုရငျ သံကုနျဟဈပွီး ဆကျတိုကျငိုလာပါလိမျ့မယျ။ ဘဘေီလေးဟာ ဗိုကျဆာတဲ့အခါ သူတို့ခေါငျးကို ဟိုဘကျဒီဘကျလှညျ့ပွီး ပါးစပျကို တပွှတျပွှတျနဲ့ လုပျတတျပါတယျ။
နာကငျြလို့ ငိုခွငျး။ ။ အကောငျတဈခုခုကိုကျလို့ပဲဖွဈဖွဈ နာကငျြတဲ့အခါ ကလေးဟာ အသံကယျြကယျြနဲ့ ဆကျတိုကျငိုလာပါလိမျ့မယျ။ အာခေါငျခွဈပွီး ငိုတာက သူတို့နာကငျြတာ ပိုခံစားရကွောငျး ပွတာပါ။ ကလေးဟာ နမေကောငျးရငျ အသံကယျြကယျြ အျောငိုဖို့ အားမရှိတာကွောငျ့ ဂြီကသြလို ငိုတတျကွပါတယျ။
ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျကွောငျ့ ငိုခွငျး ။ ။ လအေောငျ့တဲ့အခါ၊ ရှုးပေါကျခတြဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတျ ကငျြကွီးစှနျ့ထားတဲ့အခါ ကလေးတဈယောကျအတှကျ အဆငျမပွဖွေဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ ဒီအခါ အသံကယျြကယျြနဲ့ စူးစူးဝါးဝါး ငိုတတျကွပါတယျ။
အိပျခငျြလို့ ငိုခွငျး။ ။ ဘဘေီလေးဟာ အိပျခငျြနပေမေယျ့ တခြို့အကွောငျးရငျးတှကွေောငျ့ အိပျမပြျောနိုငျတဲ့အခါ စိတျမကမြေနပျနှငျ့ ဂြီကသြလို ငိုလာပါလိမျ့မယျ။ ကလေးဟာ အိပျခငျြတာကွောငျ့ သမျးပွီး သူ့နားတှေ၊ မကျြလုံးတှကေို ပှတျသပျလာပါလိမျ့မယျ။
သကျတောငျ့သကျသာမဖွဈလို့ ငိုခွငျး။ ။ စိတျတိုဒေါသထှကျပွီး ပွတျတောငျးပွတျတောငျးနဲ့ ငိုလာပါလိမျ့မယျ။ မကွာခဏ ငနာမငွိမျဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ဘဘေီလေးဟာ ယကျကနျယကျကနျနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ကော့ထိုးပါလိမျ့မယျ။ ဒါက သူတို့ရဲ့ အနှီးကို စဈဆေးပေးဖို့ အခြိနျဖွဈသလို သူတို့အဝတျအစားမှာ အရမျးပူနလေား? အေးနလေားဆိုတာကို စဈဆေးပေးဖို့ ဆိုလိုပါတယျ။
သို့သျော အရမျးငယျသေးတဲ့ ဘဘေီလေးတှဟော သူတို့အိပျရာထဲမှာ၊ ပုခကျထဲမှာ နရေတာ ပငျြးလာတဲ့အခါ၊ သူတို့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို ပွောငျးလဲခငျြတဲ့အခါ ငိုနိုငျပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျဘာသာစကားက ကလေးတဈယောကျရဲ့ ကနျြးမာပြျောရှငျမှုနှငျ့ပတျသတျပွီး အမြားကွီးပွောနပေါတယျ။
၂လအောကျ ဘဘေီလေးတှဟော လထေိုးလအေောငျ့ ဖွဈတဲ့အခါ ကြောကော့ပွီး ငိုတတျကွပါတယျ။ ကလေးဟာ အစာစားပွီး ကြောကော့နလြှေငျ သူတို့ဗိုကျပွညျ့နပွေီလို့ ဆိုလိုပါတယျ။ အစာစားနစေဉျအတှငျး ဒီလိုအပွုအမှုလုပျတာ မကွာခဏမွငျရငျ အစာပွနျအနျမယျ့ လက်ခဏာတဈခု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘဘေီလေးက ၂လကြျောပွီဆိုရငျ ဒီလှုပျရှားမှုက ပုံမှနျအားဖွငျ့ မောပနျးခွငျးနှငျ့ မကောငျးတဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ဖျောပွနပေါတယျ။
ဒါက ဘဘေီလေးတှအေတှကျ တညျငွိမျနတေဲ့ လှုပျရှားမှု ဖွဈပါတယျ။ သူတို့အိပျမပြျောခငျ နဲ့ သူတို့မသိတဲ့လူ အနားမှာ ရှိတဲ့အခါ ဒီအပွုအမှုလေးတှေ ပွုလုပျတတျပါသေးတယျ။
အမြားအားဖွငျ့ ဒီလှုပျရှားမှုက သူတို့ခန်ဓာကိုယျကို စူးစမျးယုံသာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ နားကို မကွာခဏ ထပျခါထပျခါ ကိုငျပွီး ငိုနမေယျဆိုရငျ ဆရာဝနျကို ပွသသငျ့ပါတယျ။
ဒါက ဗိုကျဆာနတေဲ့ လက်ခဏာတဈခုပါ။ ဒါကို မမေတေို့က သတိထားမိပွီး နို့တိုကျပေးမယျဆိုရငျ သူတို့ဗိုကျဆာလို့ ငိုခွငျးကနေ တားဆီးနိုငျပါတယျ။
ဒါက လထေိုးလအေောငျ့နှငျ့ ဗိုကျနာခွငျးရဲ့ လက်ခဏာဖွဈပါတယျ။ ကလေးဟာနာကငျြမှုကို သကျသာစဖေို့ ကွိုးစားနတောဖွဈပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ လကျတှကေို ဆတျခနဲ ဆကျခနဲမွှောကျခွငျး
ဒီလှုပျရှားမှုက ဘဘေီလေး ထိတျလနျ့နတေယျလို့ ဆိုလိုပါတယျ။ အသံကယျြကယျြတှေ အလငျးရောငျစူးစူး တှေ၊ ရုတျတရကျ နှိုးတာတှကေ ကလေးကို ရုတျတရကျ ထိတျလနျ့စတောကွောငျ့ ဒီတုံ့ပွနျမှုတှေ ဖွဈပျေါနိုငျပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ကလေးကို နှဈသိမျ့ ပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ကလေးအထူးကုတှကေ ဘဘေီလေးတှေ ဘာမှ နားမလညျသေးပုံပျေါရငျ တတျနိုငျသလောကျ မကွာခဏ စကားပွောပေးဖို့ နှငျ့ ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့ အရာအားလုံးကို ပွသပွီး ရှငျးပွပေးဖို့ အကွံပွုထားပါတယျ။ ဒါမှသာ ကလေးက တဈဦးခငျြးစီရဲ့ အသံနှငျ့ အမူအရာကို လငျြမွနျစှာ အသုံးပွုတတျပွီး ခဈြရသူတှနေဲ့ မွနျမွနျ ဆကျသှယျပွောဆိုနိုငျပါလိမျ့မယျ။
မေမေတို့ရဲ့ ဘေဘီလေးကို ကောင်းကောင်း နားလည်စေနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ
ဘေဘီလေး အရမ်းငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာ မိဘတွေဟာ သူတို့ကလေးလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိကြပါတယ်။ မိဘတွေဟာ ဘေဘီလေး ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ၊ ဘာ့ကြောင့်မအီမသာ ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ အတိအကျ ခန့်မှန်းဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ မိဘတိုင်းက ကလေးရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုခြင်းစီကို အဓိပ္ပာယ်သိနိုင်အောင်၊ နားလည်နိုင်အောင် လေ့လာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေဘီလေးက စကားမပြောတတ်သေးတာကြောင့် မိဘအသစ်တွေအနေနဲ့ နားလည်ဖို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူများက ဘေဘီလေးဟာ လူကြီးတွေကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ခွဲခြားဖို့ အသုံးပြုတဲ့ အချို့သော နည်းလမ်းလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ပါပဲ။
၁။ သူတို့ငိုတဲ့ နည်းလမ်း
ငိုတာက သူတို့ဘဝရဲ့ ပထမ လေးလအတွင်းမှာ သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကို ဖော်ပြတဲ့ အဓိက နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးက ဗိုက်ဆာလို့ငိုတာလား? နာကျင်လို့ ငိုတာလား၊ တခုခုကြောင့် ငိုတာလားဆိုတာကို မိဘတွေ ဘယ်လိုနားလည်နိုင်မလဲ?
မိဘတွေ လာခေါ်ဖို့ ငိုခြင်း။ ။ ကလေးဟာ တစ်ယောက်တည်း အချိန်အကြာကြီး နေခဲ့ရတဲ့အခါ ၊ မိဘတွေရဲ့ အချီအပိုးကို ခံချင်တဲ့အခါ ငိုတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာ ၅စက္ကန့် ၆စက္ကန့်လောက် ဆက်တိုက်ငိုပါတယ်။ ဘယ်သူလာချီမလဲလို့ စောင့်ဆိုင်းခြင်းဖြင့် ငိုတာကို စက္ကန့် ၂၀လောက် ခဏရပ်ထားပါတယ်။ မိဘက လာမချီဘူးဆိုရင် ဘေဘီလေးတွေဟာ အကြိမ်များစွာ ထပ်ခါထပ်ခါ ဆက်ငိုလာပါလိမ့်မယ်။
ဗိုက်ဆာလို့ ငိုခြင်း။ ။ ကလေးဟာ ကောက်ချီမခံရဘူး၊ နို့တိုက်မခံရဘူးဆိုရင် သံကုန်ဟစ်ပြီး ဆက်တိုက်ငိုလာပါလိမ့်မယ်။ ဘေဘီလေးဟာ ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ သူတို့ခေါင်းကို ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပြီး ပါးစပ်ကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ လုပ်တတ်ပါတယ်။
နာကျင်လို့ ငိုခြင်း။ ။ အကောင်တစ်ခုခုကိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နာကျင်တဲ့အခါ ကလေးဟာ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ဆက်တိုက်ငိုလာပါလိမ့်မယ်။ အာခေါင်ခြစ်ပြီး ငိုတာက သူတို့နာကျင်တာ ပိုခံစားရကြောင်း ပြတာပါ။ ကလေးဟာ နေမကောင်းရင် အသံကျယ်ကျယ် အော်ငိုဖို့ အားမရှိတာကြောင့် ဂျီကျသလို ငိုတတ်ကြပါတယ်။
ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကြောင့် ငိုခြင်း ။ ။ လေအောင့်တဲ့အခါ၊ ရှုးပေါက်ချတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ကျင်ကြီးစွန့်ထားတဲ့အခါ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် အဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခါ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ စူးစူးဝါးဝါး ငိုတတ်ကြပါတယ်။
အိပ်ချင်လို့ ငိုခြင်း။ ။ ဘေဘီလေးဟာ အိပ်ချင်နေပေမယ့် တချို့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့အခါ စိတ်မကျေမနပ်နှင့် ဂျီကျသလို ငိုလာပါလိမ့်မယ်။ ကလေးဟာ အိပ်ချင်တာကြောင့် သမ်းပြီး သူ့နားတွေ၊ မျက်လုံးတွေကို ပွတ်သပ်လာပါလိမ့်မယ်။
သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်လို့ ငိုခြင်း။ ။ စိတ်တိုဒေါသထွက်ပြီး ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့ ငိုလာပါလိမ့်မယ်။ မကြာခဏ ငနာမငြိမ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘေဘီလေးဟာ ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကော့ထိုးပါလိမ့်မယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ အနှီးကို စစ်ဆေးပေးဖို့ အချိန်ဖြစ်သလို သူတို့အဝတ်အစားမှာ အရမ်းပူနေလား? အေးနေလားဆိုတာကို စစ်ဆေးပေးဖို့ ဆိုလိုပါတယ်။
သို့သော် အရမ်းငယ်သေးတဲ့ ဘေဘီလေးတွေဟာ သူတို့အိပ်ရာထဲမှာ၊ ပုခက်ထဲမှာ နေရတာ ပျင်းလာတဲ့အခါ၊ သူတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောင်းလဲချင်တဲ့အခါ ငိုနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွင်မှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အများကြီးပြောနေပါတယ်။
၂လအောက် ဘေဘီလေးတွေဟာ လေထိုးလေအောင့် ဖြစ်တဲ့အခါ ကျောကော့ပြီး ငိုတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးဟာ အစာစားပြီး ကျောကော့နေလျှင် သူတို့ဗိုက်ပြည့်နေပြီလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အစာစားနေစဉ်အတွင်း ဒီလိုအပြုအမှုလုပ်တာ မကြာခဏမြင်ရင် အစာပြန်အန်မယ့် လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘေဘီလေးက ၂လကျော်ပြီဆိုရင် ဒီလှုပ်ရှားမှုက ပုံမှန်အားဖြင့် မောပန်းခြင်းနှင့် မကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဖော်ပြနေပါတယ်။
ဒါက ဘေဘီလေးတွေအတွက် တည်ငြိမ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အိပ်မပျော်ခင် နဲ့ သူတို့မသိတဲ့လူ အနားမှာ ရှိတဲ့အခါ ဒီအပြုအမှုလေးတွေ ပြုလုပ်တတ်ပါသေးတယ်။
အများအားဖြင့် ဒီလှုပ်ရှားမှုက သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို စူးစမ်းယုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နားကို မကြာခဏ ထပ်ခါထပ်ခါ ကိုင်ပြီး ငိုနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ပြသသင့်ပါတယ်။
ဒါက ဗိုက်ဆာနေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ ဒါကို မေမေတို့က သတိထားမိပြီး နို့တိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် သူတို့ဗိုက်ဆာလို့ ငိုခြင်းကနေ တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
ဒါက လေထိုးလေအောင့်နှင့် ဗိုက်နာခြင်းရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဟာနာကျင်မှုကို သက်သာစေဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ လက်တွေကို ဆတ်ခနဲ ဆက်ခနဲမြှောက်ခြင်း
ဒီလှုပ်ရှားမှုက ဘေဘီလေး ထိတ်လန့်နေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အသံကျယ်ကျယ်တွေ အလင်းရောင်စူးစူး တွေ၊ ရုတ်တရက် နှိုးတာတွေက ကလေးကို ရုတ်တရက် ထိတ်လန့်စေတာကြောင့် ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကလေးကို နှစ်သိမ့် ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးအထူးကုတွေက ဘေဘီလေးတွေ ဘာမှ နားမလည်သေးပုံပေါ်ရင် တတ်နိုင်သလောက် မကြာခဏ စကားပြောပေးဖို့ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာအားလုံးကို ပြသပြီး ရှင်းပြပေးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒါမှသာ ကလေးက တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အသံနှင့် အမူအရာကို လျင်မြန်စွာ အသုံးပြုတတ်ပြီး ချစ်ရသူတွေနဲ့ မြန်မြန် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။